Lalao Kris Mahjong aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Kris Mahjong an-tserasera
Lalao Online Funny Games Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Puzzle lalao Mahjong Puzzle Board lalao Manan-tsaina Html5
Ny olona rehetra dia mahafantatra fa Chris mbola ny Joker, dia foana ny mitantana ny tonga amin'ny iray hafa, na fialam-boly vazivazy izay ho anjara ny namany rehetra. Amin'izao fotoana izao, ny sain'ny ny virtuoso nahasarika mahafinaritra isan-karazany sy ny vokatra zavatra izay mipetraka am-pilaminana tao amin'ny fitoerany tany an-dakozia. Nanapa-kevitra avy hatrany Chris fa raha toa ka nifangaro teo ambony latabatra, dia ho tsara ny manana voly amin'ny alalan'ny fitadiavana mitovy tsiroaroa veshchichek. Mpivady tsirairay avy hatrany nalefa indray ho amin'ny ara-dalàna, tahaka ny Chris sy ny mpanampy, izay izao, dia ho tsy hanao hafa, araka izay dia hahazo be dia be ny fahafinaretana avy amin'izany improvised fanadiovana manjaka fikorontanana eo amin'ny latabatra. Faingampaingana kokoa ho anao hamoaka ny latabatra, dia toy izany no manontany tena hoe Inona koa ho tonga amin'ny voly ny mitovy. Noho izany Miomàna ho hangaihay izay tsy azo ihodivirana dia hisintona ny lohanao amin'ny hetsika miavaka ity izay momba ny hanomboka! Nandamina tsiroaroa na inona na inona izay hitanao, ary manao izany araka izay haingana araka izay azo atao, nefa tsy manome Chris hamitaka anao!